Cayayaanka | February 2020
Ugu Weyn Ee Cayayaanka
Talooyinka Daryeelka Mulberry
Dunidu waxay ku koraan 120 nooc oo geed ah buulal (mulberry). Geedkani wuxuu ku badan yahay Japan, India, China iyo Central Asia, iyo midhaha iyo caleemaha si guul leh loo isticmaalo daawada maxaa yeelay waxay leeyihiin guryaha dawooyinka. Ma taqaanaa? Gooryaanka Silkworms waxay ku quudiyaan caleemaha soodhaha cad. Geedka tufaaxa waa a geedaha u adkaysta abaarta iyo qabow, taas oo ka dhigaysa warshad aad u faa'iido leh meel kasta oo ka mid ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato isbinaajka sii kordhaya
Spinach waa dalag cagaaran oo leh waxyaabo badan oo si sahlan loo isticmaalo, fitamiino, dufan iyo dufan leh, macdanta iyo macruufiyeyaasha loo baahan yahay cunto caafimaad leh. Cagaarahaani waa kuwo waxtar leh oo la jecel yahay miis kasta. Isticmaalka joogtada ah ee isbinaajka waa ka hortag fiican oo cudurro ah dheefshiidka, dareenka, nidaamka wadnaha, xanuunka dheef-shiid kiimikaadka, si fiican u xoojiya difaaca jirka.
Kobcinta dhirta ee dalka: beerashada geedo iyo daryeelka ee bannaanka u furan
Pasternak waa khudradda, oo ma aha oo kaliya dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale aad u faa'iido leh. Si kastaba ha noqotee, beerashada sariirta guriga waxay leedahay tiro ah murugo, iyada oo aan taas oo aan macquul aheyn in la helo miraha waaweyn. Waxay ku saabsan tahay waxoogaa cayayaanka ah ee beerista parsnips, waxaan hoos ku sharaxnay. Beeraha lagu beero geedo dabeecadda Sifooyinka beeraha ee parsnips ee dalka intiisa badani waxay ku xiran yihiin sifooyinka noocan oo kale ah ee khudradda sida xilli sii kordhaya.
Bohamriga Foomamka Bamka: Waxkasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan beeritaanka iyo daryeelka
Nooc noocan oo kale ah ayaa ka yimid Sicily. Waxay ku raaxeeysataa caan ka weyn Western Europe iyo Turkiga. Beeraha maxaliga ah waxay yaqaanaan sida loo beerayo kaabajka kohlrabi, sababtoo ah waxaa loo tixgeliyaa inay tahay bamiin fitamiin ah oo ka saraysa qaraabada kale ee dhadhanka. Ku saabsan Kohlrabi Kohlrabi waa kaabajka hore, kaabajka sare-u bixiyay.
Beerka cudurka qaba waxaa lagu ogaaday shan gobol oo Ukraine ah
Sida laga soo xigtay adeega wargeyska ee Ukraine ee loogu talagalay Badbaadada Cuntada iyo Badbaadinta Macmiilka, dhawr beerood oo ku yaal Volyn, Kiev, Kirovograd, Rivne iyo Cherkasy ayaa diiwaangashaday xaalado faddaris ah hadhuudhka miraha iyo abuurka leh cayayaanka qashinka.
Nematode noocyada iyo hababka xakamaynta cayayaanka
Nematod waxay ka mid yihiin cayayaanka ugu caansan iyo khatarta. Ma aha oo kaliya in ay horseedaan cudur, dhimasho dhirta, laakiin sidoo kale waxay dhaawici kartaa caafimaadka aadanaha, xayawaanka. Maqaalkani waxaan eegaynaa noocyada nematod iyo waxa uu yahay, iyo sidoo kale talooyin aasaasi ah oo ku saabsan sida loola dagaalamo nematode beerta.
Miirka, iyo sidoo kale shuddiyada iyo qashinka, waxay ka tirsan yihiin amarka cayayaanka. Waxay inta badan ku nool yihiin meelo qoyan ama had iyo jeer qoyaan leh - cawska, daadadka webiga, cidhifka kaymaha qoyan iyo isku dhafan. Mole waxaa badanaa degay beerta ama beerta. Tan iyo halkan meelkasta waxaa jira dhul dabacsan oo qashin ah, oo la maraya dhulluubyo, oo qodaya jacaylka dhulka si ay u degaan dhulalka hodanka ah ee hodanka ah.
Milkiilaha guriyeynta badanaa wuxuu la kulmaa sida xayawaanka sida maadada. Waa balastar yar laakiin balwad aad u xun, taas oo horseedi karta khasaaro waaweyn. Mid ka mid ah jajabka oo kale wuxuu waxyeellayn karaa dharka qaaliga ah ee qaaliga ah si ay u noqoto mid aan suurtagal ahayn in la soo celiyo. Aynu ogaanno sida loola tacaalo dhibaatadan ama xitaa ka hortagga dhacdadeeda.
Sida loo qabsado jiirka: tuubooyinka guriga ka yimaada dhalada caaga ah
Haddii xashiishka yaryar la geliyo guri, guri ama qolal dabagal ah, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto. Mice waxay awood u yeelan karaan inay waxyeelo weyn u geystaan ​​kaydka cuntada, qiimo jabinta, noqdaan ilaha urka xun iyo caabuqyada. Maqaalkani wuxuu sharaxayaa dhowr siyaabood oo lagu dhejinayo maaddooyinka la heli karo iyada oo la isticmaalayo gacmahooda.
Aboorka Winter: sida loo maareeyo cayayaan beerta
Diyaarinta Beerta jiilaalku waxay noqotey waxqabad aad u muhiim u ah dhammaan beerta iyo dadka degaanka xagaaga, kuwaas oo ay tahay in loo baahan yahay in la qabto inta lagu jiro xilliga dayrta si loo abuuro xaaladaha ugu wanaagsan ee la ilaaliyo ee geedo midho leh iyo jiilaalka guuleysta. Tani waxay si gaar ah u tahay geedo midho dhagax ah, oo ah kuwa ugu nugul xaaladaha adag ee waqooyiga qaboobaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cayayaanka 2020